Batman the TellTale Series dị ugbu a n'efu na Google Play | Androidsis
Nwere ike soro ndị Knight gbara ọchịchịrị na Batman the TellTale Series
Ndị na -akwado Batman anyị nọ na -enwe olileanya egwuregwu TellTale kpebiri ịmalite njem ọhụrụ ya ọzọ nke ọ nwere dịka Onye isi ihe nkiri bụ Dark Knight. Ọmụmụ ihe ewepụtara iji weta na ihuenyo gam akporo gị ihe bụ akụkọ kacha dị egwu, mkpebi kacha sie ike ịme yana ụdịdị dị iche iche dị mkpa.
Naanị ụnyaahụ, o bipụtara akụkọ mbụ nke Batman the TellTale Series. Nke mbụ n'ime ndị a ga-ewepụta na Storelọ Ahịa Play yana ya na-esote mmalite nke atọ, mana na nyiwe na-abụghị ekwentị. Ndị Ihe omume mbụ a na -akpọ Realm of Shadows ọ ga -ewekwa gị tupu mkpebi na -adịghị agwụ agwụ mee ka eriri nkịtị na -eduga gị na njedebe dị iche iche. Yabụ njem gị dịka Bruce Wayne / Batman bidoro n'usoro nke na -ekwe nkwa na ọ ga -atọ ụtọ.
Ị ga -abanye na faịlụ bruce wayne psyche wee chọpụta nsonaazụ nke mkpebi ị ga -eme dị ka Knight gbara ọchịchịrị. Obodo Gotham City na -eme ihe ike na -echere gị ka ị wepụta ụdị akụkọ niile nke ị ga -ahụ ndị kacha akụkọ ifo na -atọ ọchị.
Mana n'ezie otu akụkụ kacha atọ ụtọ, ma ewere ya dị ka ihe ọhụrụ, bụ na usoro Batman nke TellTale gụnyere akpọrọ dị ka '' igwe mmadụ na -egwu ''. N'ezie, ọ bụ ọnọdụ ọtụtụ mmadụ na -enye onye ọkpụkpọ ohere ịrịọ maka ndụmọdụ ma ọ bụ mkpebi n'oge dị mkpa na akụkọ ntolite ka "ha" jiri votu ha kpebie ụzọ ha ga -aga. A na -enweta nke a site na ihe nchọgharị weebụ ejikọrọ na ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị kwadebere maka banye n'abalị na ihe egwu ebe ị ga -ahụ Batman, ihe omume mbụ bụ n'efu na Storelọ Ahịa Google Play. A ga -akwụ ndị na -esonụ ụgwọ, yabụ ị nwere ike bido ịta ata iji banye n'ọgba aghara nke Gotham City.
Developer: Gwa ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nwere ike soro ndị Knight gbara ọchịchịrị na Batman the TellTale Series
Leagoo M5 Plus gbakwunyere n'ahịa maka ihe na-erughị euro 75
[APK] Allo 2.0 na-agbakwunye nzaghachi ziri ezi, Direct Share, keyboard GIF na-akwado na ndị ọzọ